KIA , SORENTO , 2014 , YGN-4H – Super Seven Stars
KIA , SORENTO , 2014 , YGN-4H
Buy For 36 500$
KIA SORENTO ကားသည် Engine power 2.2 L / Diesel /6 Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade /7ယောက်စီး SUV ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
KIA SORENTO သည် (7) ယောက်စီး SUV ကားအမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက်မိသားစုများများဖြင့် တစ်စုတစ်ဝေးတည်းသွားလာနိုင်မည့်ဖြစ်ပြီးခရီးသွားလာရာတွင်လည်း လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့် ကားကောင်း တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။
Kia Sorento ကားသည် Luxury Grade ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Fully Leather Seats, Driver Seats and Passenger Seats with Motors,
Seats Memory, Push Start, Dual Zone Climate Control and Round Air Condition, 4.3 inches TFT Display and Rear Camera, Electric Power Steering with Media Control and Trip Computer, Bluetooth Connectivity, CD player, Radio , Aux , Ipod & USB,Steering Mode(Sport,Comfort,Normal) and Cruise Control Function များပါဝင်ပါသည်။
KIA Sorento သည် Engine 2200 CC CRDi Diesel ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှတစ်ဂါလံလျှင် 21 မိုင်နှုန်းမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်….
Steering wheel ၏အနေအထားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး (comfort)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ပုံမှန် Steering wheel အနေ အထား (Normal)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Steering ကိုအနည်းငယ်လေးသော(Spot)အနေအထားဖြင့်သော်လည်းကောင်း မိမိစိတ်တိုင်း ကျပြု လုပ်နိုင်သော Mode Selection လဲပါရှိပါတယ်
ကားမောင်းနေစဉ် ကားနောက်ခန်းမှ Passenger များ နေရောင်စူးရှမှုကို ကာကွယ်ပေးရန် ကားအတွင်းဘက်တွင် Retractable Sunshade ပါဝင်ပါသည်။